Ujeedada Hormed Hay'ada Hornmed waxay aaminsan tahay in caafimaadku sal u yahay wanaaga farxad ku noolaashaha qof baniaadamka ah. Caafimaadka qofka waxay kaloo sal u tahay dhaqaaqaha qofka si uu kor ugu qaado dhaqaalaha nolosha. Hadaba Hornmed waxay u balan qaadeysaa in ay bukaanka siin … Read More
Hornmed waa hay'ad fahansan dhibaatooyinka ay la kulamaan bukaanka ka yimaada geska Afrika marka lagu soo sheego jirooyin aan lagu daaweyn karin dhulkooda hoooyo, laakiin nasiib wanaag waxaa ah in dadkeen aka yimaada geeska Afrika ay ka faa'iideysan karaan horumarka ay gaareen wadamada … Read more..
Sidee ayey u shaqeysaa Hornmed booqashada caafimaad baarista ? Hornmed waa Hay'ad la shaqeysa isbitaallo waa weyn oo leh takhaatiir faro badan oo ku takhasusay noocyo kala duwan ee caafimaadka banaiaadamka. Waxaad dooran kartaa nooc kasta ee dawaada aad u baahan tahay ka dib isbitaalada waxay … Read more..
Qalitaanka Wadnaha: Waa qalitaan xaga wadnaha ay sameeyaan takhaatiirta takhasuskoodu yahay xaga wadnaha. Qalitaankan waxaa badanaa loo adeegsadaa in laga daaweeyo wadanaha dhibaatooyin ku yimaada halboowlayaasha dhiiga qaada. Qalitaankan waxaa kaloo adeegsadaa in la saxo dhibaatooyin qofku ku … Read more..
Isbitaalada Maleysia Isbitaalada Maleysia waxay ka mid yihiin isbitaalada caafimaadka kuwa ugu fiican aduunka. Isbitaaladaas waxay ka diiwaan gashan yihiin hay'adaha ugu sareeya ee caafimaadka aduunka laga ictiraafsan yahay, hay'adaas waxaa ka mid ah "Joint Commission International" oo marka … Read more..